७ महिनामा कति गर्यो सरकारले विकास खर्च ? - सुनाखरी न्युज
७ महिनामा कति गर्यो सरकारले विकास खर्च ?
Posted on: February 14, 2020 - 4:35 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो चौमासिकसम्म विकास बजेट खर्च निरासाजन देखिएको छ । दोस्रो चौमासिक सम्म निरासाजनक रहेको विकास खर्च तेस्रो चौमासिकको पहिलो महिनामै खर्चले गति लिएको छ । तेस्रो चौमासिकको पहिलो महिनासम्म कूल विकास खर्च भने मात्र ७६ अर्ब पुगेको छ । यो रकम कुल विनियोजनको तुलनामा मात्र १८.८५ प्रतिशत हो ।
यस चालु आवमा विकास बजेटलाई कूल ४ खर्ब माथिको लक्ष्य राखेको सरकारले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाबाट विकास बजेटमा भारी कटौती गरेको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार अबको ५ महिनामा सरकारले सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । अर्थातः प्रतिमहिना ५० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने चूनौति सरकारसँग रहेको छ । ७ औं महिनासम्म भने सरकारले औसतः मासिक ११ अर्ब मात्र पूँजिगत खर्च गर्न सकेको छ । ७ औं महिनासम्म आइपुग्दा कूल विकास खर्च भने ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस अवधिमा ५ खर्ब ३५ अर्ब १६ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त विनियोजनलाई सरकारले अर्धवाषिर्क समिक्षामार्फत १० प्रतिशत घटाइसकेको छ । अब कूल बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च भने ४ खर्ब ८६ अर्ब १२ करोड रुपियाँ भइसकेको छ । यो कूल विनियोजन लक्ष्यको ३८.२१ प्रतिशत हो ।